Hevitra momba ny iPad mini Pro 8,9-inch | Vaovao IPhone
Hevitra momba ny iPad mini Pro 8,9-inch
Ignacio Sala | 05/03/2021 10:00 | iPad
Ny patanty dia hevitra miorina tsara izay fisoratan'ny orinasa amin'ny anarany fa tsy midika hoe afaka mahita ny mazava izy ireo amin'ny ho avy. Ny foto-kevitra, azontsika atao ny milaza fa mitovy izy ireo, satria amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia manolotra fiasa sy / na endrika izay, amin'ny tranga maro, dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy.
Omaly izahay dia niresaka momba ny tsaho vaovao momba ny fahafahan'ny Apple handefa a iPad mini Pro. Fanombohana izay araka ny loharanom-baovao notanisiko tao amin'ity lahatsoratra ity, nanondro hatramin'ny semester faharoa ho daty fanombohana. Fotoana fohy talohan'ny namoahana ampahibemaso ny hevitra sasany mifandraika amin'ity modely vaovao ity.
Ity hevitra vaovao an'ny iPad mini Pro ity, misy ao Svet Apple, mampiseho antsika iPad 8,9-inch miaraka amin'ny endrika mitovy izay hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny faritra iPad Pro, misy sisiny fisaka, sisin'ny efijery kely kokoa, Face ID ary fifandraisana USB-C eo ambany.
Manantena aho fa hamoaka iPad mini Pro i Apple miaraka amin'ity famolavolana sy fisongadinana ity, saingy indrisy, araka ny tsaho mifandraika amin'ny fanavaozana ny famolavolana ny mini iPad (dia mitovy amin'ny endriny voalohany no namboarina tamin'ny tsena tamin'ny 2012), maro amin'ireo fampiasa ireo no tsy misy.
Avy amin'ny foto-kevitra ka hatramin'ny tena izy
Ny tsaho milaza fa ity mini iPad vaovao ity tsy hanana Face IDFa kosa, hifindra ny Touch ID mankany amin'ny sisiny, indrindra amin'ny bokotra an-trano. Mikasika ny fifandraisana, ity mbola ho varatra.
Raha miresaka ny haben'ny efijery isika, raha manondro efijery 8,4-inch ny loharanom-baovao sasany, ny sasany kosa manondro hatramin'ny 8,9. Ny hany zavatra toa mazava dia ny efijery eo anelanelan'ny 8 sy 9 santimetatra.
Ny mazava dia izao, rehefa manakaiky ny daty fandefasana dia hianatra fampahalalana bebe kokoa momba azy ireo isika fampisehoana sy ny endriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Hevitra momba ny iPad mini Pro 8,9-inch
Ahoana ny famindrana sary sy horonan-tsary avy amin'ny iCloud mankany amin'ny Google Photos